Haintrano teny Ampandrana – Saika hatao batemy tamin’ny Krismasy teo izy telo mianadahy nodorana velona - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Haintrano teny Ampandrana – Saika hatao batemy tamin’ny Krismasy teo izy telo mianadahy nodorana velona
Lakalaka tokoa ny fiainana. Saika latsa-dranomaso mihitsy Raharimasinirina Georgette na i Bebe Masy, nitantara fa saika hatao batemy tamin’ny Krismasy teo ireo zafikeliny telo mianadahy nodoran’ny raikeliny tao an-tranony, tetsy Ampandrana, ny 28 novambra teo.
« Maro ny zavatra niainana tamin’ireny, tonga hatramin’ny fanovana anarana an’ilay zaza sisa tsy maty notsaboina teny amin’ny hôpitaly noho ny fahatahorana ilay raikeliny, izay mbola tonga teny ihany saika haningotra ny ainy », hoy hatrany ity renibeny ity.
« Efa voaomana tato an-trano avokoa ny akanjo, kiraro sy ny pitsopitson-javatra marobe saika hanatanterahana ny batemin’izy ireo, saingy noho iny zava-niseho iny dia may avokoa izany rehetra izany », hoy reniben’izy telo mianadahy, nanganohano.
« Ny ampitson’iny dia tonga teny amin’ny hôpitaly vao maraimbe ilay raikeliny toy ireny olona hamangy ireny. Olona tsara sitrapo no niandry azy tany amin’ny hôpitaly, ka tsy nahafantatra azy. Ireo dokotera no avy hatrany dia kaodikaody ka tsy namela azy niditra. Nitondra mofomamy nolazainy fa homena ilay zaza izy, ka ireo dokotera no nandray azy. Tsy avy hatrany anefa dia nomen’izy ireo ilay zaza ilay fanomezana fa mbola nojereny, ka hita fa nisy poizina izany », hoy ihany i bebe Masy, nitantara ny zava-nitranga teny amin’ny hôpitaly.
»Tolotra » novaina »Avotra »
« Voatery araka izany ny fianakaviana, nanova ho »Avotra » ny anaran’ilay zaza teny amin’ny hôpitaly sady izy rahateo sisa no avotra tamin’izy efa-mianaka raha Randrianarison Nomenjanahary Tolotra no tena anarany », hoy hatrany ity renim-pianakaviana ity.
« Ny marainan’ilay voina rehefa avy tany amin’ny hôpitaly dia nanomana soratra tamin’ny baoritra ilay raikelin’izy ireo ka niandry lamasinina nandalo hamonoany tena. Tsy nisy nandalo anefa ary tsikaritry ny fokonolona izy ka noraisim-potsiny », hoy Rakotonirina Maurice na i Dada Mô, raiben’i Tolotra.
« Raha vao nandre indray ny tato an-trano, hoy i Dada Mô, fa voasambotry ny polisy ilay nahavanon-doza, dia nisy nikasa hamaly faty avy hatrany. Amin’ny maha kristianina anefa dia nanarina avy hatrany ireo saika hanao izany ka nitony ihany izy ireo nony farany ».
Randrianarison Nomenjanahary Tolotra, ilay akanga sisa nanamborana
Hanao mpitondra fiaramanidina
Efa azo lazaina ho salama tsara i Tolotra, ilay akanga sisa nanamborana tamin’izy efa-mianaka, amin’izao fotoana izao. « Ny tanako havia no mbola tsy afaka mihetsika tsara. Tsy afaka mianatra ihany koa aho amin’izao, saingy efa nampanantena i Mompera fa ao aminy, hono, aho no hianatra amin’ny taom-pianarana manaraka », hoy ny fitantaran’ity zaza ity.
« Hanao mpitondra fiaramanidina no fikasako any aoriana any ka izany no hiezahako mafy raha vao mianatra eo », hoy hatrany i Tolotra, tamin’ny endrika miramirana. « Mbola misy olana kely ny fitadidiany vokatr’ilay »anesthésie générale » natao azy teny amin’ny hôpitaly », hoy ny renibeny.
Mompera iray tsara sitrapo no mandray an-tanana tanteraka ny fiahiana ny fahasalaman’ity zaza ity amin’izao fotoana izao sy ny fampianarana azy amin’ny taom-pianarana manaraka.
Hain-trano, Mpanoratra Rijakely, 12.01.2013, 00:46	FIARAHAMONINA